Xiaomi POCO M3 nyocha: atụmatụ, ọnụahịa na echiche | Gam akporosis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 08/04/2021 18:00 | Emelitere ka 11/04/2021 10:52 | Nyocha
Taa ka anyị wetara gị a pụrụ iche nyochaa ma na-atụ anya nke ukwuu. Anyị enweela nnukwu ihu ọma ịnwale ule Xiaomi Poco M3. Anyị niile nwere ụfọdụ ihe ọmụma banyere ama ama taa anyị na-echeta ntoputa nke Poco Ekwentị F1 n'ahịa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla, ngwaọrụ a na-amaghị ama jisiri ike dọta uche mmadụ niile. Ọbụna taa, F1 ka dị n'etiti nkwenye nke smartphones dị n'etiti nye ezi nguzo n’etiti arụmọrụ na ọnụahịa. Ma ndi ohuru nke ndi Poco na abia iji mee niche n'etiti ihe kachasị mkpa, ebe a Poco M3 dabara n'ụzọ zuru oke.
1 POCO, ụlọ ọrụ na-enweghị ogige
2 Mbupu Poco M3
3 Nke a bụ Poco M3
4 Ihuenyo Poco M3
5 Kedu ihe dị n'ime Poco M3?
6 Igwefoto Poco M3
7 Ihe nlere nke foto ewere na M3
7.1 Ngwa igwefoto
8 Ike batrị na obodo kwụụrụ mapụtara
9 Nche na njikọta
10 Nkọwapụta tebụl
11 Uru na ọghọm
11.5 Banyere Gshopper
POCO, ụlọ ọrụ na-enweghị ogige
Kemgbe mmalite nke 2018 ahụ, ụlọ ọrụ ahụ amalitela, dika Redmi mere, kewapụrụ onwe gị na Xiaomi dịka akara aka “nweere onwe”. Na site na ama nke bu ụzọ siri ike nke nwere ngwaọrụ mbụ ya jisiri ike mee ka ahịa ahụ maa jijiji, yana nchekwa nke eziokwu a na-enye, nnukwu ngwaọrụ ọzọ bịarutere, Poco M3.
Mgbe mgbawa mgbawa nke Poco X3 nke ụlọ ọrụ a jisiri ike mee ka ndị na-eso ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ na mpaghara kachasị elu nke ahịa ahụ. Na M3, Obere ebumnuche siri ike nke inweta ezigbo iberi nke achịcha dị n'etiti. Dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, usoro Ọ dị mfe dịka o siri ike iru: Ngwaahịa dị mma na ọnụahịa dị mma.
Poco M3 bụ akpọrọ ka ọ bụrụ ezigbo onye na-ere ahịa n'oge 2021. Na-erughị ọnwa anọ n’ahịa jisie ike iyuzucha ngwaahịa nke dị n'ọtụtụ oge na uzo ahia nile. N'ezie ihe ngosi doro anya na na-azacha ahịa nakwa na ọ ga-aga n’ihu ime nke a n’ọnwa ndị na-abịanụ. Ọ bụrụ na ama a bụ naanị ihe ị na-achọ, ugbu a ị nwere ike nweta nke gị LITTLE M3 na Gshopper ọnụahịa kacha mma.
Mbupu Poco M3
Dị ka anyị na-achọ ime mgbe niile, ọ bụ oge imeghe igbe ma lelee ihe niile anyị hụrụ n'ime. Dị ka ọ dị nkịtị, anyị anaghị ahụ ọ bụghị ihe ijuanya ma ọ bụ ihe ọ bụla pụrụ iche. Mgbe anyị kwusịrị nke ahụ, anyị nwere ihe ndị ọtụtụ na-amalite ịtụfu na ụfọdụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ dị mkpa anyị na-enwekarị ekele.
Anyị chọtara ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, nke ọ bụ ezie na dịka anyị kwuru nwere nnukwu batrị, dị arọ karịa ọtụtụ ekwentị ndị ọzọ nwere obere batrị. Anyị na-achọta eriri data na ibu, na nke a na format USB Cdị C. Na Chaja ikike, ngwa nke maka ụfọdụ ndị nrụpụta adịghịzi mkpa.
Dị ka mgbakwunye dị mkpa anyị nwere uwe na-agbanwe agbanwe nke silicone nke ahụ dabara dị ka ogwe aka ya na ekwentị. Ọ bụ nkọwa iji nweta ngwa mbụ anyị chọrọ mgbe niile maka ama ọhụụ site na mmalite. Ma ọ bụghị, Ndenye Malite Guide na ndị ochie akwụkwọ ikike metụtara akwụkwọ.
Ekele dịrị ndị enyi anyị @Gshopper_USA anyị na-anwale POCO M3 dị egwu. N'ebe a, anyị ga-ahapụrụ gị obere iwebata igbe #egharị pic.twitter.com/oZ4CdtDzl9
- gam akporosis (@androidsis) April 4, 2021
Nke a bụ Poco M3
Na Androidsis anyị na-apụta mgbe niile dị ka omume ọma n'echiche na daring na nhazi nke ngwaọrụ ọ bụla. Ugbu a ọ na-esiri ike ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ndị ọzọ. Mana ebumnuche zuru oke ọ nwere ike ịmepụta ngwaahịa na-adịghị ka ndị ọzọ. Poco M3 dị iche na nke ahụ bụ ihe dị mma ma nwee ekele dị ukwuu.
Ihe mbu adọta uche Site na anụ ahụ akụkụ Poco M3 mgbe ijide ya n'aka gị bụ azụ ya. Azọ a modul igwefoto atọ, banyere nke anyị ga-ekwu banyere ya n'ụzọ zuru ezu mgbe e mesịrị, ọ na-ike na elu akụkụ bụ kasị nta pụtara ìhè. Akwa rektangulu na agba dị iche iche na ihe dị iche iche dị na ntanetị na akụkụ ya dị elu. Nwere ike ịmasị ya karịa ma ọ bụ obere, mana ọ bụ nke mbụ ma ọ dị oke mma.
Na azụ kwa anyị kwesịrị ka a mata ihe eji. Ọ na-apụtawanye ìhè doro anyị anya nke ahụ nhọrọ nke plastic bụ ihe ịga nke ọma. Na a ike ike n'isi nke na-abụghị ileghara, Poco M3 dị ezigbo ụtọ imetụ aka. IMHO, otutu mma karịa enwu gbaa azụ na ejiri nchachachacha nke na-emecha bụrụ mpempe akwụkwọ.
Zụta ebe a POCO M3 na ego 15%
Plastic laghachiri na ejiji, ee, na ngosipụta kachasị ọhụrụ na iji alloys emeela nke ọma. Na mgbakwunye na nweta ọtụtụ njide, karịsịa na enweghị ikpe silicone, rbump na o kwere omume ọkọ nwere nnọọ mma.
Na mpụta a na-echekwa otu udidi ahụ na ihe ndị ahụ, na enyo na-ejikọ ọnụ n'ụzọ zuru oke na-enweghị nsọtụ ma ọ bụ ọnụ ọnụ iji mebie ma ọ bụ mebie. N'ileghachi anya n'akụkụ, anyị na-ahụ otu esi ahọpụta ya akara mkpisiaka n'akụkụ. A ebe ndị nrụpụta ndị ọzọ mechara kpụchaa, ma nke ndị ọzọ dị ka Sony na-aga n'ihu ịkụ nzọ na nsonaazụ ọma.
N'elu akara mkpisi aka, nke na-ejekwa ozi bọtịnụ ụlọ ọ bụrụ na anyị pịa, anyị ga-ahụ njikwa olu jiri bọtịnụ elongated.
Na elu bụ Ihe ntinye 3.5 jack maka ekweisi. Na aka ekpe naanị nwere oghere na tree maka kaadị. Mesie ya ike na ọ bụ a okpukpu atọ nke anyi nwere ike tinye n’otu oge kaadi SIM na kaadi kaadi SD Micro. Na okpuru anyị hụrụ, site n'aka ekpe gaa n'aka nri, igwe okwu, nke Nchaji njikọ usoro onyinye USB Cdị C, na naanị ya nkwuputa ụda.
Ihuenyo Poco M3
Nke a bụ otu akụkụ kachasị ike nke ngwaọrụ a. Ihuenyo Poco M3 na-achịkwa iji mee ka ọ pụọ iche na igwe ntanetị ndị ọzọ. Anyị chọtara a karịa mmesapụ aka nke 6,53-inch na obere IPS àjà a Full HD Plus mkpebi na a 60 Hz ume ọhụrụ. Ihe siri ike ịchọta na ekwentị ndị dị n'otu ọnụahịa ahụ.
Dịka iwu zuru oke, mgbe anyị na-achọ ngwaọrụ dị n'etiti ihe dị ka otu narị na iri ise euro, anyị maara na anyị ga-ahapụrịrị ihe ụfọdụ. Otu n'ime ihe ndị bụ isi bụ ihuenyo na-adịkarị obere na karịa mkpebi niile dị ala. Ebe a na M3 abịarute stomping n'ebumnuche nke nye ihe omuma karie ndi ozo, ma ọ bụrụ na o meelarị obi ike gị pịa ebe a wee nweta nke gị ọnụahịa kacha mma.
La ntụpọ 19.5:9 na-egosi akụkụ nke ogwe ya ma mee ka ọ dị mma ịnụ ụtọ vidiyo na ọdịnaya multimedia n'ụzọ dị mma. Ọ nwere 395 pikselụ kwa inch njupụta (dpi). Obi abụọ adịghị ya, ihuenyo nke na-eme ka ọ bụrụ smartphone na-atọ ụtọ. Na nke a, na mgbakwunye na ime mgbanwe, na-eme ka ọ na-enwu na mpaghara mgbagwoju anya dị otú ahụ.
Ihuenyo Poco M3 nwere a ngwaọrụ n'ihu panel biri na-eru 83% nke otu. Ezigbo mmekọrịta nke n’enweta akụkụ buru ibu site na ụdị ọkwa eji. Anyị nwere Corning ozodimgba iko 3 iko nchedo larịịỌ bụghị usoro nchebe kachasị ọhụrụ, mana ọ ga - eme ka o guzoro ruo ụfọdụ tụlee na ọkọ na - eme nke ọma.
Ihe ngwọta iji "zoo" igwefoto dị n'ihu n'ụzọ kachasị dị ala abụwo site na a dobe ụdị notch. Anyị nwere ike ikwu ụdị ọkwa na ọ bụ ejiji. Ọ bụ ezie na anyị nwere mmasị na oghere ndị a na-akpọ na ihuenyo karịa. Otu ihe ndọghachi azụ anyị nwere ike itinye na ihuenyo bụ na enwu ya adịghị n’ebe ndị ọzọ nọ na n'oge doro anya ọ na-esiri anyị ike ịgụ ihuenyo ahụ nke ọma.
Kedu ihe dị n'ime Poco M3?
Anyị na-elekwasị anya n'ihe Poco M3 na-ebu n'ime. Oge eruola ịgwa gị ihe ngwa ama ama a nwere iji wee nwee ike ịmata ihe ọ nwere ike inye. Iji vitamin M3 anyị chọtara mgbawa mara dị ka Qualcomm SnapDragon 662. Ndị nrụpụta dịka Oppo, Motorola, Nokia, Realme ma ọ bụ Xiaomi n'onwe ya tụkwasịrị obi ya na Redmi 9.
Anyị chọtara otu Octa Core CPU na 4 cores na-arụ ọrụ na 2.0 GHz na 4 nke ọzọ na 1.8 GHz. Ihe esere eserese kpuchiri ya na a GPU nke Qualcomm, Adreno 610. Anyị nwere ike igwu na-enweghị nsogbu ọ bụla nke ọkacha mmasị anyị egwuregwu na-enweghị definition nsogbu na na nnọọ nkọ ndịna.
Poco M3 nwere ebe nchekwa abuo RAM, na oge a, ngwaọrụ anyị nwalere nwere 4 GB, ọ bụ ezie na e nwere nsụgharị dị ike karị na 6 GB. Ikike nke nchekwa sitere na 64 GB, na n'otu aka ahụ, e nwere nsụgharị nwere ikike 128 GB. Anyị nwekwara ohere ịgbasa ebe nchekwa site na iji kaadi Micro SD.
Igwefoto Poco M3
Ọ bụrụ na anyị ekwuola na mbụ na ihuenyo bụ otu n'ime ike ya, anyị enweghị ike ikwu otu ihe gbasara igwefoto ya. Ikekwe anyị nwere atụmanya ka elu. Ọ bụ ezie na anyị ga-eburu n'uche mgbe niile na Poco M3 bụ nke dị n'etiti ma nwee ọnụ ahịa na-asọmpi na ngwaọrụ nke oke kachasị.
Nke ahụ kwuru, igwefoto M3 anaghị akwụsị ime ihe ọjọọ, dị ka n'okpuru anyị nwere ike ịlele ụfọdụ foto nke eserese. Ọ bụghị naanị na ọ na-agbachitere onwe ya nke ọma, ọ dịkwa ike ịchụ àjà dị ezigbo mkpa na ọkwa dị elu na nkọwa agba dị mma. Igwe igwefoto ka na-ejide anya na-achọpụta a okpukpu atọ ebe nke ọ bụla nwere nkọwa dị iche iche na ọrụ akọwapụtara nke ọma.
Maka anya nkịtị Little nwere ihe mmetụta Samsung S5KGM1 ụdị Isocell, na mkpebi nke 48 megapixels na imeghe 1.79 gbadoro anya. La nke abụọ nke anya m nwere a Omnivision mmetụta OV02B10 ụdị CMOS na Baịbụl hiwere isi n'ebe nke 2.4. Nwere mkpebi nke 2 megapixels ma na-elekọta mode eserese iji mezuo mmetụta nke omimi. Na nke ato nke anya m nwere ihe mmetụta Hynix HI-259 pịnyekwa CMOS, na oghere yiri otu na otu mkpebi nke 2 megapixels. Ihe mmetụta a na-ahụ maka ịnweta nkọwa macro.
Maka igwefoto onwe n'ihu, anyị na-ahụ a Omnivision OV8856 ụdị CMOS sensor, na nke a na mkpebi nke 8 megapixels na imeghe 2.0 gbadoro anya. Igwefoto zuru oke na mkpebi maka ezigbo oku vidiyo ma ọ bụ foto selfies.
Anyị nwere ike ikwenye, na-enweghị atụ ụjọ na anyị ga-ezighi ezi, nke Poco M3 nwere a nnọọ ezigbo igwefoto ngalaba. Karịsịa, dịka anyị kwurula, na-eburu n'uche ọnụahịa ọnụahịa nke ọ na-akwagharị. Ka ọ were na ijikọta ọtụtụ akụkụ ya kachasị ike, Poco M3 nwere ike ịghọ ngwaọrụ a na-apụghị imeri emeri. Ọ bụrụ na POCO M3 ekwenyelarị gị, echekwala ọzọ zụta nke gị ebe a na ego 15%.
Ihe nlere nke foto ewere na M3
Inwe echiche ziri ezi banyere otu igwefoto si arụ ọrụ, anyị apụwo ile ya ule ma lee, anyị ga-ahapụrụ gị obere ntakịrị ihe osise ndị ahụ emere.
Na foto a, anyị nwere ike ịghọta maka ịma mma ya niile ihe igwefoto M3 nwere ike ịnye. Dị ka ọ na-adịkarị na ese foto nke ngwaọrụ ọ bụla, na-enye ihe kachasị mma na ezigbo ọkụ dị na gburugburu. Mana na foto a anyị nwere ekele maka agba, las ụdị ihe ndị dị na ihu, ọbụna mbugharị.
Ọ bụkwa ihe a na-apụghị izere ezere na na mpaghara kachasị anya a na-ahụ mkpọtụ ụfọdụ ma ahịrị ndị ahụ nwere ntakịrị mgbagwoju anya. Ihe na-na-enwe mmetụta ndị ọcha photographed.
Ebe anyị nwere ike ịghọta, na a ime ụlọ foto, yana iche iche na agba ha na-eji ikwesị ntụkwasị obi mụta nwa. Anyị na-achọpụta nke ọma iche textures i we nweta kwa ezi nkọwa.
Na nke a zuru ezu jide, a na-egosikwa ya nke ọma ihe zuru ezu na textures na ihe. Ka mma nkowa nwetara ekele maka ọkụ ka mma. N'ezie, ezi ọkwa nke nkọ na etiti ihe.
Lee, anyị tinyere POCO M3 igwefoto dijitalụ mbugharị. Ọ bụ foto nke odida obodo nke na-ewe ọtụtụ ohere, ma ọ bụ foto dị mma nke ọma.
Na mbugharị niile etinyere, enweghị ihe ijuanya, ọtụtụ mkpebi efuola ma pikselụ apụta. Ọ na-ejisi ike iji nweta ihe dị nso, mana iji foto nwere ogo aghara a yikarịrị.
Anyị na-enwe mmasị na ngwa igwefoto nke MIUI mgbe niile. N'agbanyeghị anya na ọ bụ dịtụ anya ma ọ bụghị oké ngosi, na omume ọ dị mfe iji ma dị irè. Anyị na-achọta ntọala niile anyị nwere ike ịchọ yana ọbụlagodi maka ndị ọzọ tozuru etozu nwere ntọala nwere ike ịhazi ya.
Anyị nwere dị iche iche foto ụdịdị Otu n'ime ha pụtara ọnọdụ eserese nke nwere ike weghara ezigbo njide. Otu nkọwa zuru ezu ị ga-echeta bụ nke ahụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ka igwefoto wepụta ngwa ọgụ ya kachasị ike na foto nweta kacha mma anyị ga-enwe jiri aka họrọ nhọrọ 48MP.
Maka vidiyo anyị nwere Oge gboo na nwayọ nwayọ. Nhọrọ abụọ ahụ na-enye nsonaazụ dị mma. Anyị nwedịrị ohere imezu foto panoramic ma ọ bụ ụzọ i scanomi akwụkwọ.
Ihe anyị enweghị ike ịkwụsị ịza ajụjụ bụ na igwefoto O meela ka anyị dịtụ nwayọ mgbe a bịara n'ịhazi foto. N'etiti otu ijide na ọzọ ọ dị ka ekwentị chọrọ ntakịrị sekọnd maka ihe mmetụta ga-adị ọzọ. Ihe nke yiri zuru oke dozie gị dabere na ngwanrọ na mmelite n'ọdịnihu.
Ike batrị na obodo kwụụrụ mapụtara
N'ebe a, ndị na-eme Poco jisiri ike mee ka M3 pụọ na ndị ọzọ. Batrị nke ngwaọrụ anyị abụrụla ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile ike ọgwụgwụ. Ọ bụ ihe dị mma na iji ọtụtụ ihe mmetụta, nnukwu ihe ngebichi, na iji oge were, nnwere onwe nke ngwaọrụ ndị dị ugbu a.
Poco M3 jisiri ike mebie ihe mgbochi abụọ na batrị na obodo kwụụrụ onwe ya. Odi ka ndi ama ama nwere okwu efu banyere batrị batrị ma odighi ndi nwere onu ahia di elu.
The Poco M3 atụmatụ batrị 6.000 mAh na-enweghị atụ. Ọzọkwa, na nnwere onwe nke gafere ụbọchị abụọ zuru oke nke oge. Nnukwu mmeta ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ, anyị ahụla ekwentị nwere ụgwọ batrị dị mma nke na-agbasaghị oge ya. Notice hụrụ a ezigbo ọrụ ike ịrụ ọrụ iji gbatịa nnukwu batrị ya na nke kachasị.
Ekwesiri ighota, karia mgbe anyi na ekwu okwu banyere oke batrị, na nka Ọ naghị emetụta ma ngwaọrụ ọ dị arọ, ma ọ bụ na o nwere oke oke. Site na ederede niile, ọ bụ nke kachasị mma n'echiche a. Mana ka anyị cheta, iji kwụụrụ onwe gị ihe karịrị ụbọchị abụọ zuru ezu!
Isi ihe ọzọ nke batrị bụ na nwere ngwa ngwa ịgba ụgwọ. Ihe na-adọrọ mmasị nke ga-enye anyị ohere ịnwe 100% nke ụgwọ batrị anyị na obere oge karịa ka a tụrụ anya ya. Karịsịa na-atụle nke ahụ Poco gụnyekwara chaja na-acha ọkụ ọkụ na igbe M3.
Nche na njikọta
N'akụkụ a anyị ga-ekwu maka ya akara mkpisiaka. Dị ka anyị kwuru ná mmalite, ihe pụtara ìhè na mbụ bụ ebe ọ nọ. Anyị anwalela ngwaọrụ nwere akara mkpisiaka n'otu akụkụ ma anyị ahụla ka ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile. Izi ezi na nha nwere ọtụtụ ihe ime ebe a, yana anyị kwesịrị ịghọta na ikpe a adịla irè.
Dị ka nchekwa ọzọ, POCO M3 na-etinyekwa ohere nke iji igwefoto dị n'ihu maka ịkpọghe site na njirimara ihu. Anyị anwalela ụfọdụ ngwaọrụ ndị na-anya isi maka ịmeghe ihu ma na-arụ ọrụ n'ihu karịa nke a.
Maka njikọta anyị na-ahụ Bluetooth 5.0. Mana anyị ga-ekwu maka ha abụọ enweghị nnukwu nsogbu; NFC na 5G. Ọ bụ ihe dị mma na ngwaọrụ dị na ọnụahịa a enweghị 5G, mana enweghị NFC na-egbochi ohere ya ntakịrị. Ihe ọzọ kwesịrị ịrịba ama bụ ntinye nke Xiaomi nke usoro nhazi nke ọma MIUI na mbipute ya 12. Ihe na-enye ngwaọrụ ahụ ezigbo ọnụnọ, ma o yiri ka emechala na-agbada site na okike ka ọ dị na mbụ.
Ihuenyo 6.53 Full HD +
Mkpu ihu 1080 X 2340 px - HD zuru ezu +
Njupụta ihuenyo 395 ppp
Ume ume ọhụrụ 60 Hz
Nhazi Qualcomm Snapdragon 662
CPU Octa-isi 4x Kryo 260 2.0 GHz + 4x Kryo 260 1.8 GHz
GPU Omenala 610
Rear igwefoto Ihe mmetụta ntanetị atọ + 48 + 2 + 2 Mpx
Isi ihe mmetụta 48 Mpx
Nke abụọ Eserese mode mmetụta 2 Mpx
Igwe ihe mmetụta mode 2 Mpx
Flash Dual ikanam
Ibu ibu 198 g
Ahịa 169.99 €
Linkzụta njikọ Obere M3
Oge erugo ịgwa gị, n’echiche onwe gị, ihe kachasị amasị anyị banyere Poco M3 na ihe ndị ka nwere ohere maka imeziwanye. Ihe a niile ka ha na-ekwughachi na ọ dị ezigbo mkpa iburu n’uche na anyị na-ekwu okwu ngwaọrụ dị n'etiti na-enweghị oke karịa € 150 ma na-enye atụmatụ ndị na-adịghị ahụkebe.
La ihuenyo O doro anya na ọ bụ otu n'ime ndị isi na-akwado Poco M3. Egosiputara ya mkpebi, nha 6.53 na 60 Hz.
La 6000 mAh batrị na ihe di egwu nnwere onwe na-enye nke ihe karịrị ụbọchị abụọ nke ojiji.
El ego Poco M3 na-eme ka ọ dị mfe ikpebi na smartphone mgbe ị nwere oke ego, ọ nweghị asọmpi.
El imewe nke a ngwaọrụ kwesịkwara ịbụ n'etiti "uru". N'ihi otu esi eji plastik eme ihe na-enweghị ngwaahịa na-egosi na ọ dị obere, ọ bụ nke ọzọ.
Enweghị nke anyị na-atụle dị mkpa, Poco M3 enweghị NFC, ihe anyi tufuru.
La foto igwefoto ngwa Ọ dịghị tụrụ ndị ọzọ mgbe ọ na-abịa na-agba ọsọ ọsọ. Mgbe anyị na-ese foto, anyị hụrụ obere lac na nhazi nke ihe oyiyi.
El ihuenyo ihie ọ bụghị ịkọ na ọnọdụ ndị na-enwu gbaa.
Anyị na-atụ uche 5G, dị ka anyị nwere ike ikwu nke ọ bụla na-adịbeghị anya ama, ma ọzọkwa anyị ga-amata ụdị ọnụahịa anyị nọ.
Ndị anyị na ha rụkọ ọrụ maka nyocha a, Gshopper, na-abata site na nkwado dị oke mkpa nke na-eme ya onye mbata kọmputa eletrik izizi maka ndị ahịa azụmahịa na a ahia e-commerce zuru ụwa ọnụ maka ndị na-azụ ụwa. Ekele maka teknụzụ igwu data ahụhụ, ha jikwaa ịchọpụta ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu n'ụwa iji zụọ ha ọnụahịa kacha mma.
Ozi bụ na ndị kasị ewu ewu na ngwaahịa si mba niile iru ọ bụla obodo asịwo. Na 11 afọ ahụmahụ na teknụzụ na DNA zuru ụwa ọnụ. A mbinye aka na Singapore dabeere ihe achọtara na mgbasawanye zuru oke na nke ugbu a nwere ọnụnọ na mba 18.
Ihe na: 8 April 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 11 April 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyocha Xiaomi POCO M3: ọ bara ya uru na nkọwa ya?
Solitaire - Ultimate Collection Imelitere Na 4 New Game Modes And More